Plastic kuumbwa workshop - Yuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
Jera mutsetse vane anopfuura 16 epurasitiki jekiseni moldings. Iyo jekiseni kuumbwa kunogadzira epurasitiki chikamu cheJERA fiber epurasitiki zvigadzirwa. Iyo epurasitiki jekiseni maitiro ndeye yekugadzira maitiro ekugadzira zvikamu nekubaya zvinhu zvakaumbwa muforoma. Uye zvadaro gadzira tsanangurai kupembedza zvikamu zvezvigadzirwa zvedu. Isu tinoita R&D uye tinogadzira zvigadzirwa zvine chekuita nekugadzirwa neiyi tekinoroji.
Jera faibha epurasitiki jekiseni Kuumbwa workshop kunyanya kuburitsa zvinotevera epurasitiki zvikamu zve:
-FTTH inonamira kiramba, wedge kiramba uye kuturika zvisungo
-drop waya tambo kiramba
-Fiber optic mabhokisi uye kuvhara
-Electrical kuboora zvinobatanidza
-FTTH waya mabhureki
-Fiber optic waya adapta
-LV abc yekupedzisira makapu
-Low voltage tambo inosungisa
Izvo mbishi zvigadzirwa zvinoshandiswa mupurasitiki jekiseni mapolymers akaita Nylon, ABC, PC, PP, nezvimwe. Zvese izvi mbishi zvinhu zviri kuongororwa zviri kureva muyero ISO 9001: 2015, uye zvatinoda zvemukati.
Nekushandisa iyi tekinoroji, Jera fiber ine kugona kutsvagisa uye kugadzira zvigadzirwa zvitsva uye kuita zvimwe zvevatengi zvinodiwa zvigadzirwa zvinoenderana nematanho edu azvino. Inoita Jera faibha ine yakafara chigadzirwa renji kuti igutse vatengi zvakasiyana zvinodiwa. Uye zvigadzirwa zveJERA zvinova zvinokwikwidza mumisika
With izvi jekiseni moldings, tinogona kubereka jekiseni zvikamu zvose pachedu. Iyo inochengetedza mutengo uye inoita iyo yeyuniti mutengo wezvigadzirwa zvakanyanya kukwikwidza, uye isu tinogona nyore kudzora mhando isu pachedu.
Mazuva ese kuvandudza zvigadzirwa zvekugadzira uye mhinduro dzekuvandudza mashandiro kunoita kuti JERA ivandudze zuva nezuva.
Chinangwa chedu ndechekupa vatengi vedu mhinduro yakazara yeiyo kuvaka neterevhizheni network. Ndokumbirawo unzwe wakasununguka kuti utaure nesu kuti tiwedzere kubatana, tarisiro tinogona kuvaka hwakavimbika, hurefu-hukama hukama.